भारतीय मन्त्रीले किन गरे उत्तर कोरियाको भ्रमण? – Kite Sansar
भारतीय मन्त्रीले किन गरे उत्तर कोरियाको भ्रमण?
हालै एक जना भारतीय मन्त्रीले दुई दशकपछि उत्तर कोरियाको भ्रमण गरेको भारतले बिहीवार बताएको छ।
अघिल्लो चोटि सन् १९९८ मा भारतीय जनता पार्टीको गठबन्धन सरकारमा सूचना तथा प्रसारण मन्त्री रहेका मुख्तर अब्बास नाक्वीले एउटा चलचित्र उत्सवमा सहभागी हुन प्योङ्याङको भ्रमण गरेका थिए।
यसपालिको भ्रमण निकै अर्थपूर्ण छ।
भारतीय सेनाका पूर्वप्रमुख रहेका विदेश राज्यमन्त्री भीके सिंहले उत्तर कोरियामा वरिष्ठ मन्त्रीहरू एवम् अन्य अधिकारीहरूसँग भेटघाट गरे।
अघिल्लो साता दुई दिन भएको भेटमा “दुई देशबीच राजनीतिक, क्षेत्रीय, आर्थिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक सहकार्य” बारे छलफल भयो।
यो दुर्लभ कूटनीतिक पहल दुई कोरियाबीच एक दशकभन्दा लामो समयपछि भएको पहिलो शिखरवार्तापश्चात् र अमेरिका तथा उत्तर कोरियाका नेताहरूबीच अर्को महिना हुनलागेको भेटअघि भएको छ।
शिखरवार्ता भङ्ग गर्ने उत्तर कोरियाको चेतावनी
तर यदि अमेरिकाले पारमाणविक अस्त्र परित्याग गर्न दबाब दिइराखे उत्तर कोरियाले वार्ता नहुने चेतावनी दिएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जङ-अनबीच हुने भनिएको भेट अनिश्चित बनेको छ।
के उत्तर कोरिया कूटनीतिक सङ्कटमा नफसोस् भनेर भारतले यही समयमा उसलाई पुन: वार्तामा संलग्न गराउन खोजेको हो?
कि भारतले आफ्नो साझेदार अमेरिकाका लागि पहल गरिदिएको हो?
अनि भारतमा सन् २००४ मा सुनामीको प्रकोप हुँदा उत्तर कोरियाले ३० हजार अमेरिकी डलर सहयोग उपलब्ध गराएर सदाशयता देखाएको थियो।
भारतले २० वर्षपछि प्योङ्याङमा मन्त्री पठाएको भए पनि उत्तर कोरियाबाट वरिष्ठ अधिकारीहरूले भने वर्षौँदेखि भारतको भ्रमण गरिरहेका नै छन्।उत्तर कोरियाले कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राखेका थौरै देशमध्ये भारत एउटा देश हो। भारत उत्तर कोरियाका लागि संसार हेर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण झ्याल हो। दुई देशबीच लामो, हल्का गाढा सम्बन्ध छडा. प्रशान्त कुमार सिंह, इन्स्टिट्युट अफ डिफेन्स स्टडीज एन्ड अन्यालसिस, दिल्ली एप्रिल २०१५ मा उत्तर कोरियाका विदेश मन्त्रीले दिल्लीको भ्रमण गरे। उनले आफ्ना समकक्षीसँग मानवीय सहायता खोजे।
त्यहाँ भारतीय मन्त्री किरेन रिजिजूले “दुई पक्षबीच थप व्यापार र वाणिज्यका आधारमा सम्बन्ध अघि बढ्ने” बताएका थिए।
सन् २०१३ मा चीन र दक्षिण कोरियापछि भारत सम्भवत: उत्तर कोरियाको तेस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार थियो।
भारतले विशेषत: औद्योगिक रसायनहरू, कच्चा खनिज तेल र कृषिजन्य उत्पादनहरू निकासी गर्थ्यो भने ड्राइड फ्रूट र तारिएका फल, गुँद र हिङ आयात गर्थ्यो।
दिल्लीस्थित इन्स्टिट्युट अफ डिफेन्स स्टडीज एन्ड अन्यालसिससँग सम्बध्द डा. प्रशान्त कुमार सिंह भन्छन्, “उत्तर कोरियाले कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राखेका थौरै देशमध्ये भारत एउटा देश हो। भारत उत्तर कोरियाका लागि संसार हेर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण झ्याल हो। दुई देशबीच लामो, हल्का गाढा सम्बन्ध छ।”
भारतकी विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले टिलर्सनलाई खुलाएरै “तपाईँका केही मित्रराष्ट्रका दूतावासहरू त्यहाँ रहनुपर्छ, त्यसो हुँदा सम्पर्कका लागि केही माध्यमहरू खुला रहन्छन्” भनेकी थिइन्।
दिल्लीका अनुसार प्योङ्याङले मन्त्री सिंहलाई “कोरियाली प्राय:द्वीपमा भरखर विकसित घटनाक्रमबारे सङ्क्षेप”मा बतायो र उनले कोरियाली शान्ति प्रक्रियाका लागि भारतको सहयोग पुन: प्रस्तुत गरे।
उसोभए के सिंहको भ्रमणको सम्बन्ध किम र ट्रम्पबीच हुने भनिएको तर अहिले अनिश्चित भएको भेटसँग छ त?
डा. सिंह भन्छन्, “अहिले हामी अनुमान मात्र गर्न सक्छौँ। ट्रम्प आफ्नो शिखरवार्ता बिथोल्न चाहँदैनन्। त्यो भेटको प्रत्याभूतिका लागि अमेरिकीहरूले भारतीय सहयोग खोजेको हुन पनि सक्छ।”
“भारत यहाँ सानो पात्र हो। तर यो क्षेत्रमा रहेको र समस्यामा संलग्न नभईकन उत्तर कोरियासँग राम्रो सम्बन्ध भएको एक मात्र ठूलो राष्ट्र हो।”
क्युबाः विमान दुर्घटनामा सयभन्दा बढीको मृत्यु